Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Ndị njem ụgbọ elu Rowdy Frontier duziri oche
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Frontier Airlines weputara nkwupụta, na -ebo ebubo na nwoke ahụ tiri otu nwoke nwoke na -eje ozi ụgbọ elu ma zọọ ụmụ nwanyị abụọ na -eje ozi ụgbọ elu ahụ.
Onye njem amalitela ime ihe ike ma wakpo nwoke na -eje ozi ụgbọ elu.
Onye njem na -enweghị isi na -eti mkpu na nne na nna ya bara ọgaranya ma nwee nde $ 2.
Frontier kwụsịtụrụ ndị ọrụ ụgbọ mmiri maka eriri ọpịpị onye njem n'oche ya ka ha rutere na Miami.
Frontier ụgbọ elu bidoro nyocha banyere ihe mberede ikuku nke ndị ọrụ ụgbọ mmiri meriri.
Vidio nke onye njem na-enweghị nchịkwa ka a na-ete teepu na oche ya n'etiti ụgbọ elu mgbe ebubo na ọ na-akụ aka ma na-asọgharị ndị na-efe efe abanyela na mgbasa ozi mmekọrịta, nke ahụ kpaliri ndị ọrụ ụgbọ elu nyocha.
Vidiyo ahụ bidoro na Tuesday ka ọ na -abanye na mgbasa ozi mmekọrịta. Na vidiyo a, a ga -ahụ onye na -ahụ maka ụgbọ elu ka ọ na -adọkpụ onye njem n'oche ha, ọbụna na -etinye teepu ahụ n'ọnụ ha, ebe ndị ọzọ nọ n'ụgbọ elu na -aerụrị ọerụ.
Frontier Airlines weputara nkwupụta gbasara ihe ahụ merenụ, na -ebo ebubo na nwoke ahụ tiri otu nwoke nwoke na -eje ozi ụgbọ elu ma zọọ ụmụ nwanyị abụọ na -eje ozi ụgbọ elu ahụ.
“N'oge ụgbọ elu si Philadelphia na Miami na Julaị 31, onye njem kpọtụrụ onye na -ahụ maka ụgbọ elu ahụ n'ụzọ na -ekwesịghị ekwesị ma mesịa wakpo onye na -eje ozi ụgbọ elu ọzọ n'ụzọ anụ ahụ, "ụlọ ọrụ ụgbọ elu ahụ kwuru na nkwupụta. "N'ihi nke a, ọ dị mkpa ka ejidere onye njem ahụ ruo mgbe ụgbọ elu rutere na Miami ma ndị mmanye iwu abịarute."
Ndị uwe ojii Miami jidere onye njem ahụ, Maxwell Berry, ọ na -echekwa batrị atọ ọnụ.
Berry, onye gbara afọ iri abụọ na abụọ, kwuru na ọ gbajuru iko n'akụkụ onye na -ahụ maka ụgbọ elu ma mesịa si n'ụlọ ịsa ahụ pụta n'enweghị uwe, na -achọ ka ndị ọrụ chọta ya uwe ọhụrụ n'ime akpa ya. Ka oge na -aga, Berry kpuchiri igbe ụmụ nwanyị abụọ na -eje ozi wee tụọ nwoke na -eje ozi ụgbọ elu ihu, ndị uwe ojii kwuru.
Egburu ihe onyonyo a ngwa ngwa na mgbasa ozi mgbasa ozi, ebe ole na ole na -egosi ọmịiko maka onye njem ejidere.
Na vidiyo dị iche nke ebubo na -egosi Berry, ọ na -eti mkpu na nne na nna ya bara ọgaranya ma nwee nde $ 2.
N'agbanyeghị nkwado ọha na eze maka ndị na -ahụ maka ụgbọ elu, Frontier amachibidoro ha ọrụ ụgbọ elu ruo mgbe enwere ike ime nyocha zuru oke.
“Ndị na -eje ozi ụgbọ elu ahụ ga -abụ, dị ka achọrọ n'ọnọdụ ndị dị otú a, a ga -enwere onwe ha ife efe ruo mgbe ha mechara nyocha ihe ndị mere,” ka ụlọ ọrụ ụgbọ elu ahụ kwuru.